पारवहन Archives - Page4of5- Business World
कुरियर सेवा व्यवसायलाई उद्योग सुचीमा राखिनु पर्ने माग राखिँदै, नेपाल कुरियर सेवा संघको २६ औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
उद्योग तथा वाणिज्यलाई प्रत्यक्ष साझेदार गर्ने कुरियर सेवा व्यवसायलाई उद्योगमा सुचीकृत गरिनु पर्न माग राखिँदै कुरियर व्यवसायीहरूको छाता संगढन नेपाल कुरियर सेवा संघ (कोसान) को २६औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र - २१ गतेका दिन कुरियर दिवस तथा वार्षिक साधारण सभा आयोजना हुने गर्दछ । तर यस आ.व मा कोभिड महामारीका कारण ढिलो गरी फाल्गुन ८ गते सं...
कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित प¥यटन, कृषि र निर्यात क्षेत्र उकास्न राज्यबाट कर छुटको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
गोविन्द ढुङ्गेल सह–सभापति–कर तथा राजस्व , उवासंघ वर्तमान अध्यक्ष, नेपाल कुरियर सेवा सघं –(कोसान) निजी क्षेत्रबाट राज्यलाई कर शीर्षकमा प्रत्यक्ष सहकार्य गरिएको छ । उवासंघमा आबद्ध हजारौँ कम्पनीबाट आ.व २०७६÷०७७ मा कुल ३८४.५३ अर्ब कर बुझाइएको थियो , जुन आ.व २०७५÷०७६ को दाँजोमा ७.३१ प्रतिशत बढी हो । त्यस आ.व मा कुल ३५८.३५ अर्बको कर संकलन गरिएको आन्तरिक राजस्व विभ...
उद्योग सुचीमा फ्रेट व्यवसाय नसमेटिए पछि सरकारबाट उत्पादनशील क्षेत्रलाई उपल्वध गराउने सबै सुविधाबाट वञ्चित ।
जीवन पाण्डे प्रमुख कार्यकारी निर्देशक न्यु योर्क कार्गो प्रा.लि. फ्रेट व्यवसाय वाणिज्यको प्रमुख अंग हो । सेवा क्षेत्र अन्तर्गत पर्न यस तर्फका व्यवसायलाई सरकारी स्तरबाट हाल सम्म उद्योग सुचीमा राखिएको छैन । वस्तु उत्पादकलाई मात्र उद्योगको दर्जा दिइने सरकारी रवैया छ । त्यही उत्पादित वस्तु गन्तव्यका बजार सम्म पु¥याउने सेवा क्षेत्रलाई उद्योगको पहिचान दिन सरकारी कं...
६९ औ विश्व भन्सार दिवस,भन्सार स्तरीकरण र सुद्धिडिकरणमा दिर्घकालीन आपूर्ति सञ्जाललाई व्वस्थीत गरिने नारा सहित विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो ।
प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी महिनाको २६ जनवरीका दिन मनाइने विश्व भन्सार दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रममको आयोजना गरि मनाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सोही अवसरमा अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्घानाले भन्सारका भौतिक पूर्वाधार सुद्रिडिकरण र स्तरीकरणका कार्यविधिलाई प्राथमिक्तामा राखिएको बताएका छन् । अबका दिनमा भन्सारमा आधुनिक उपकरण सहित प्रविधि मैत्री बनाउन स्रोत परिच...
कोभिड भ्याक्सिन नेपालभर पु¥याउन कुरियर व्यवसायी तैयार छ ।
सञ्जय मण्डल महासचिव– नेपाल कुरियर सेवा संघ (कोसान) प्रबन्ध निर्देशक, सौर्य वल्डवाइड एक्सप्रेस प्रा.लि कोभिड सङ्क्रमण महामारीबाट जनतालाई बचाउन नेपाल सरकारको अनुरोधले छिमेकी राष्ट्र भारतले उपल्वध गराएको १० लाख डोज कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उपल्वध गराइकोमा स्वागत योग्य कार्य भएको महसुस गरिएको छ । अर्को खेपको भ्याक्सिन छिटै नेपालमा आइपुग्ने बताइएको पछि सोही भ्याक्सिनको वैज्ञानिक ढ...
कुरियर क्षेत्रको फराकिलो दायराले घटाउँछ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
प्रकाश गैरे प्रबन्ध निर्देशक (ग्यालेक्सी एक्सप्रेस कुरियर एण्ड कार्गो प्रा. लि.) कुरियर क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यावसायिक वातावरण आउन जरुरी छ । वाणिज्यका प्रत्यक्ष सहयोगी यस क्षेत्रमा व्याप्त दर रेटमा केन्दि«त अस्वथ्य प्रतिस्पर्धाले व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । एकल कम्पनीले उपलवध गराउने प्रतीशपर्थी दर महँगो तर नेटवर्क सञ्चालन भएका कम्पनीले बजार मूल्य भन्...
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लजेष्टीक म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर नेपालमा प्रयोग सुरु ।
अन्तर्देशीय लजेष्टीक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दे लैजाने क्रममा लजेष्टीक म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर प्रयोगले तीब्र गति पाउँदै गएको छ । उत्पादनकर्ता र सेवाग्राहीलाई एउटै छाता मुनी व्यवसाय गर्न सहज बनाउँदै लजेष्टीक सेवा प्रदायक कम्पनीको दायरा बिस्तारमा सफ्टवेयर प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । त्यसो त हाल पु¥र्याउ जस्ता केही लजेष्टीक सफ्टवेयर बजारमा देखिन थालेका छन् । यही ...
एकीकृत भन्सार नाका जाहाँ भारतीयलाई मस्ती नेपालीलाई सास्ती
भन्सार असुली राज्यको प्रमुख आम्दानी मध्ये पर्दछ । त्यही आम्दानीको स्रोत भन्सार पूर्वाधार विकासमा एककृत भन्सार चेक पोस्ट (आइ.सी.पी) नेपाल–भारत संयुक्त सहयोगले निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छ । वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर र नेपालगन्ज नाकामा आइ.सी.पी निर्माणका लागि नेपाली पक्षबाट जग्गा उपल्वध गराउने र भारतले पूर्वाधार निर्माया गर्न सन्धि बि.स २०६४ मा सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्...
नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ , काठमाडौँको अध्यक्षमा शिशिर बहादुर गौतम सर्वसम्मत निर्वाचित ।
नेपाल भन्सार एजेन्ट संघ , काठमाडौँको १० औँ वार्षिक साधारण सभा र छैठौ अधिवेशन एक भव्य समारोहका बिच सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाबाट शिशिर बहादुर गौतम पुन्ह अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । गौतमको अध्यक्षतामा ११ सदस्य कार्यकारिणी समिति गढ्न गरिएको एजेन्ट संघले जनाएको छ । त्यस कार्यसमितिको प्रथम उपाध्यक्ष– प्रेम कुमार अधिकारी , दित्तिय उपाध्यक्ष – प्रेम बहादुर बानिया ...
भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धान्जली !